China PVC mkpuchi galvanized Hexagonal Waya Netting Chicken&Poultry Ntupu factory na suppliers |XINTELI
PVC mkpuchi galvanized hexagonal waya ịkpa nkata ọkụkọ na anụ ọkụkọ
Ntupu size: 1 '', 1/2 '', 5/8 '', 3/4 '', 2''
Ihe nlele waya: 0.9mm ~ 2.0mm
Ogologo: 5m, 10m, 25m, 30m, wdg.
Obosara: 0.5m ~ 1.5m
Atụmatụ: Corrosion na-eguzogide, nchara na-eguzogide, ọxịdashọn na-eguzogide, na-agbakọta ngwa ngwa.
Nkwanye: Enwere ike ịme nha ndị ọzọ karịa ndị ahụ a kpọtụrụ aha n'elu ka ha wee kwado ya.
Pvc mkpuchi hexagonal waya ntupu bụ aslo mara dị ka chinken netting.Pvc ntekwasa hexagonal waya netting na-mere nke ala carbon ígwè wire.With ogologo ighikota, laa azụ ighikota nhazi.Pvc mkpuchi hexagonal waya ntupu na-eji dị ka ọkụkọ netting.Pvc nchebe oyi akwa ga-ukwuu. mee ka ndụ ọrụ nke netwọk dịkwuo elu, mgbochi ultraviolet, mgbochi ịka nká na ọrụ ihu igwe. Nhọrọ nke agba dị iche iche nwere ike ime ka gburugburu ebe obibi mara mma. N'ezie, agba a na-ewu ewu bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. PVC mkpuchi ọkụkọ waya ntupu nwere ike igbochi anụ ọkụkọ na mmerụ ahụ.
Plastic hexagonal waya ntupu dị ka ụdị ihuenyo, nke a na-ejikarị na petrochemical ụlọ ọrụ, ihe owuwu, aquaculture na ndị ọzọ. Dị ka ewu nke ofu mgbidi, n'ala ihe efere mkwado, okpomọkụ nchekwa, okpomọkụ mkpuchi; Ike osisi ọbọp ọkpọkọ, ji esi mmiri ọkụ nchekwa nchekwa. ,antifrize, nchekwa ebe nchekwa, nchekwa akuku.Enwekwara ike iji zụọ ọkụkọ, ọbọgwụ, oke bekee na anụ anụmanụ ọ bụla ọzọ.
Ụdị azụmahịa: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe & Ahịa
Isi ngwaahịa: waya ntupu, metal nsu
Afọ nke ntọala: 2008
Asambodo: TUV, ISO9000
Ọnọdụ: Hebei, China (Mainland)
ụlọ ọkụkọ, ogige ogige, ogige ụmụaka, ihe ịchọ mma ekeresimesi.
Iji adaba, ogologo ndụ ọrụ, elu nchebe ike, chekwaa njem na-eri, ezi mgbanwe.
c. Enwere ike ịnakwere usoro nkwakọ ngwaahịa ọzọ mgbe nkwenye gasịrị
Nke gara aga: Ihe mkpuchi igwe mkpuchi hexagonal ígwè waya mkpuchi PVC
Osote: Igbe Galvanized Hesco Barrier Welded Gabion Box
Pvc mkpuchi waya mesh ngere
Mpempe akwụkwọ ntupu ejiri akwa Pvc
Pvc Wire netwọk
kpara waya ntupu ngere
Panel Fence 3D nwere mkpuchi PVC